Waxaad ku baran kartaa adeegga RMA halkan
Macaamiisha qaaliga ah: Waad ku mahadsan tihiin soo iibinta qalabkeena. Si aan si fiican kuugu adeegno, waxaan ku siin doonnaa siyaasadaha adeegga soo socda. Ballanqaadka tayada qalabka Shirkaddayadu waxay kuu ballanqaadaysaa inay ku siiso qalabka si loo hubiyo in qalabka qandaraaska uu yahay mid cusub, asal ah, caadi ah ...
4G isku xirka router warshadaha l2tp baadi 809 xal
4G isku xirka router warshadaha l2tp qaladka 809 xalka Marka nidaamka Win7 uu kuxiran yahay VPN, qalad 809 ayaa soo muuqanaya, taasoo muujineysa in iskuxirka isku xirka kumbuyuutarka iyo serverka VPN aan la dhisi karin. Xaaladda kor ku xusan, 4G router-ka warshadaha wi ...
Dhibaatada 4G router warshadaha (hal)
4G router warshadaha Khadka kumbuyuutarka waa caadi, laakiin tilmaame LAN-ka ee router-ka ma shidanaayo, maxaa jira? 1) Hubi in routerku si caadi ah u shaqeynayo iyo in madaxa DC ee korontada uu dabacsan yahay; 2) Hubi in isku xirnaanta fiilada shabakaddu ay wanaagsan tahay iyo in kale ...
Dhibaatada 4G ee router-ka warshadaha (laba)
4G router-ka warshadaha Kadib markii aad gelisay kaarka SIM-ka, muxuu PC-gu u gali la’yahay internetka? 1) Hubi in anteenada shabakadda 3 / 4G si sax ah loo rakibay; 1) Hubi in kaarka SIM-ku uu ku rakiban yahay jihada saxda ah, taas oo keeneysa barnaamijka inuu qaldo in kaarka SIM-ka aan la ogaan, ...
Qaabeynta aasaasiga ah ee marin u helka PPTP VPN subnet ee 4G router warshadaha
Qaabeynta aasaasiga ah ee wada xiriirka labada dhinac ee PPTP VPN subnet ee 4G router warshadaha WIN2008 Server VPN qaabeynta server 1) Xaaladda laba router warshad 4G ah VPN macaamiisha ku xiran serverka ayaa la soo bandhigayaa. 2) Server 4G router-ka warshadaha waxaa lagu daraa miiska isdabajoogga joogtada ah
4G warshadaha router wan isku xidhka shabakada isku xidhka
4G warshadaha router wan isku xirka shabakada isku xidhka Taas micnaheedu waa, 4G router-ka warshadaha ma gelinayo kaarka simka, wuxuuna si toos ah ugu xirayaa shabakada jirta shabakada siligga siligga Network (routerka weyn) ee marinka Internetka ama garaacida PPPoE ee isku xirka isku xirka shabakada, iyo dhammaan taraafikada xogta ganacsiga i ...
Meelaha dalab ballaadhan ee suuqa warshadaha 4G
Horumarinta Caalamiga 4G: LTE wuxuu gaaraa caymiska aasaasiga ah, tirada isticmaaleyaashuna waxay sii wadi doonaan inay si isdaba joog ah u koraan mustaqbalka Sida laga soo xigtay xogta ka socota Machadka Cilmi-baarista Warshadaha Saadaalinta, illaa seddexaad ...
4G DTU madal maaraynta fog iyadoo la adeegsanayo qaabeynta aasaasiga ah
4G DTU madal maaraynta fog iyadoo la adeegsanayo qaabeynta aasaasiga ah 1) Ku qor lambarka taleefanka ee kaarka SIM-ga ee 4G DTU, kaas oo loo isticmaali doono marka la wacayo DTU marka la dirayo farriimaha qoraalka dambe; 1) Isku hagaaji lambarka taleefanka gacanta ee saxda ah ee loo isticmaalo in lagu diro farriimaha qoraalka si loo xakameeyo 4G DTU si loogu galo ...
4G DTU imtixaanka qaabka SMS saafi ah
4G DTU tijaabada qaabka SMS saafi ah Barnaamijka 4G DTU oo isku hagaaji dejimaha taxanaha ah ee kuxiran 4G DTU sida ku cad shaxanka: 1 Qaabee qaabka qalliinka SMS saafi ah sida ku cad shaxanka: 2 jaantuska 2 U orod kaaliyaha dekedda taxan sida waxaa lagu muujiyey jaantuska: 3 image 3 Isku xir ser ...